Author: Ner Arashikree
Ituu keessatti — Goobam jedhamu. Haalli kun gosa, karra hundumaa keessatti akkasitti hojjata.
Galaawudoos humna Habasha gurmeesse ofirraa ittise. Isaaniis, bara Gadooma abbootii isaanii keessa waggaa 40 abbootii isaanii eeganii kan dhalatan waan tahaniif sadarkaa Gadaa keessa seenuudhaan miseensa paartii tahuu dandayan. Malaak Saggad nama Daragoot jedhamu akka Gojjaamiin ittisuuf itti erge. Lolli amantii yeroof akkasiit qabbanaawullee Oromoon lola isaa itti fufe. Remember me on this computer. Qaaloota sseenaa jennu akka bara dhihoo keessa ummata samuuf jecha sobanii, gowwoomsanii irraa waa guurratan akka qaallichaa Habashaamiti.
Akkaataa dinagdeefi polotikaa issaarraa aadaan hawaasa Oromoo keessatti, bara Gadaa dagaagee beekamaa ture. Yeroon isaas osoo hin gahinnillee waan beekamuuf sadarkaa itti aanuuf isa qopheessaa ture.
KITAABA HAARAYA: Imala Qabsoo Oromoo Fi Mul’ata ADO
Raabni isaa yeroosii Yaayyaa Gulleelee jedhama ture. Kanaaf, Gadaan waggaa saddeet saddeetiin lakkaawama. Kan kanarraa adda tahees nijiraa.
Yeroo kana keessatti dhimma biyya, bulchiinsa, sera, aadaa, amantiifi seena dabre baratu. Kanaaf Oromoon osoo sirna Gadaatiin as hin bahin, sirna qoodama karra cimdii kanaan walbulchaa ture jechuun nidandeenya.
Goggeessa Gadaa Miseensaa fi Marsaa Gadaa b. Isaaniis warraa akka a.
Gadaa Boorana, Maccaa, Tuulamaafii Gujii keessatti qoodamni kun jira. Lolli sun guyyaa kudhalama deeme.
Hubannootni karaa cufaa jiru akka aadaatti fudhatamee hawaasa keessatti fudhatama. Achirraa Gojjaamiifi Daamoot waraanuu jalqabe. Sadarkaa Gadaa kun Tuulamafi Ituu keessatti isa shannaffaadha. Yaa dhaloota ammaa jechoota gootota abbootii keenyaa kana meeqa keenyatu dammaqee hordofaa jira? Maqaan isaaniifi tartiibni isaaniia kopha kophaafi beekamaadha.
Jecha kana kan dubbate A. Malaak Saggad ykn Sarta Dingil kan jedhamu itti dabree aangoo Habashaa qabatee lola ittifufe. Baalli kan Melba weeraruu jalqabe Muudannii dhufatee hamma qarqara laga Awaashitti irra qubatan. Seenaa ummatoota addunyaa keessatti godaansa heedduu argina. Hayyoota garaa garaa madda ummata Oromoo irratti qorannoo gaggeessan keessaa C. Dalagaa kanaafi kana fakkaatanitti haa bobbahan malee, sadarkaa kanatti tohannoo warraa ala hin bahan.
Lubni hundi duula akka duuluufi laf haaraya baasan malee, meendhicha akka hin hidhanne kan jedhu ture. Maqaan sirna kanaas Gadaa jedhama. Hariiroon kun dura sadarkaa maatii keessatti gad dhaabbate.
Birmajiin Tuulamaafi Macaa lafa fardi isaa dhaquu dandayu mara deemee qabate. Doorama Bakka heddutti sadarkaa itti aangoo qabachuudhaaf ilmaan kormaa qophii barbaachisaa godhaniidha. Bara dhihoo dura akka waliin turan, afaan isaanii seenaaa seenuun ragaa nitaha. Akkaataan qoodamaa kuniis, seera umamaa kan hordofu qaba. Ofiis garuu Roobalee dhiibuu hindandeenye. Sirna Gadaa keessatti muuda Qaaluu kan yeroo malee, ayyaanni guddaan muuda jedhamu jira.
Boorana keessatti — Raaba dorii jedhamu. Ilmaan kormaa sadarkaa lammaffaa fixanii waggaa 16 — 24 jidduu: Dabballooma Kitaabba jecha dabballee jedhamu kan Gadaa Booranaarraa fudhatameedha. Gujii keessatti — Doorii jedhamu. Waliigalteen jaalalaan, tokkummaan waliinjiraachuuniis aadaa jiraachaa ture. Hawaasa Senaa bara sirna gadaa keessatti, kun murna lolu ture. Akka aadaan sirna kanaa hin dabnefi seerriifi heerri sirnichaa hin banne qaceelcha.
Arsii keessatti ayyaana baraartiifi guduruu, gurra uraafii jaarraa qaluu c. Hambisaan duula gurguddaa Shawaa keessatti haa godhu malee, Amaara dhiibuu hin dandeenye.
Leave a comment on KITAABA SEENAA OROMOO PDF